दलान नेपाल : April 2016
तमलोपा बैठकमा संघिय गठवन्धनको आलोचना ।
at 8:16 AM Posted by Dalan
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको एक प्रमुख घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको आज देखि जनकपुरमा सुरु भएको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकमा सघिय गठवन्धनको आलोचना गरिएको छ । हालै मधेशी मोर्चा र केहि आदीवासी जनजातीहरुको पार्टीहरु र संगठन मिलाएर संघिय गठवन्धनको निर्माण गरिएको छ । पछिल्लो समयमा यही संघिय गठवन्धनको व्यानरमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ । तमलोपाको शनिवार देखि सुरु भएको बैठकमा दुई ओटा प्रतिवेदन गरिएको छ । महामन्त्री सवेन्द्रनाथ सुक्लाले राजनितीक प्रतिवेदन पेश गरेका छन भने अर्का महामन्त्रीद्धय जितेन्द्र सोनल र गोविन्द चौधरीले महाधिवेशन तयारी सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका छन । बैठकमा पेश गरिएको राजनितीक प्रतिवेदन माथी वोल्दै तमलोपाका धेरै जसो केन्द्रिय सदस्यहरुले संयुक्त लोकतान्त्रिम मधेशी मोर्चाको भुमिकालाई गौण बनाउदै लगेको भन्दै संघिय गठवन्धनको अवधारणा प्रति तिखो आलोचना गरेको महामन्त्री गोविन्द चोधरीले बताए ।
आन्दोलनरत गठवन्धनद्धारा सरकारी कार्यलयहरुमा कालो झण्डा गाडियो ।
at 6:43 AM Posted by Dalan
आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धनको पुर्व घोषीत कार्यक्रम अनुसार आज जिल्ला र क्षेत्रिय तहका सरकारी कार्यलयहरुमा कालो झण्डा गाडेका छन । सरकारको विरोध स्वरुपमा मोर्चा र गठवन्धनले सरकारी कार्यलयहरुमा यसरी कालो झण्डा गाडेको जनाएको छ । नयां सविद्यानको विरुद्धमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सहितको गठवन्धनले गएको १५ गते देखि पुन आन्दोलनमा होमिएका छन । बैशाख मसान्त सम्म जिल्ला र क्षेत्रिय तहको विरोध कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको गठवन्धनले १ जेठ देखि काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन अन्र्तगत गठवन्धनले मुख्य गरी सिहदरवार घेराउ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनको कस्तो तयारीमा छन संघिय गठवन्धन !
at 7:00 AM Posted by Dalan
काठमाडौको रिडरोडमा मानव साडलो प्रर्दशन गर्ने देखि ७२ घण्टे अनशन सम्मको तयारीमा संघिय गठवन्धन ।
जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा प्रचारात्मक आन्दोलन सुरु गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धनले १ जेठ देखि काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन सिहदरवार घेराउको साथ गर्ने निर्णय गठवन्धनले सार्वजनिक गरे संगै चौतर्फी चासोहरु देखिन थालिएको छ । मधेशी मोर्चा र जनजातीहरु विभिन्न पार्टी र संगठनहरु विचको संघिय गठवन्धनले आखिर काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन कसरी गर्ने छन, त्यो पनि चासोको विषयहरु देखिनमा आइरहेका छन । संघिय गठवन्धनको हालै बसेको बैठकले यस वारेमा आन्तरिक केहि छलफलहरु गरेको भए पनि नेताहरुले सिंहदरवार घेराउ वाहेकको अन्य कार्यक्रमहरु वारेमा अहिले सम्म वोलेका छैन । गठवन्धन स्रोतका अनुसार १ जेठमा शनिवार पर्ने भएकाले २ जेठ देखि सुरु हुने सिंहदरवार घेराउ कार्यक्रम सगै अन्य विरोधका कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गर्ने तयारी भईरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई जिल्ला प्रशासन मार्फत आन्दोलनकारीको ज्ञापन । २१ गते देखि नै काठमाडौमा प्रर्दशन हुदै ।
at 6:17 AM Posted by Dalan
आन्दोलनरत संयुक्र लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहितको संयुक्त गठवन्धनले बुधवार देशैभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ आफनो मागको वारेमा ज्ञापन पत्र पठाएका छन । गएको ६ बैशाखमा गठवन्धनले काठमाडौमा बृहत अन्तक्रिया कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरेको २६ वुदे अवधारण पत्रलाई आफनो आन्दोलनको वटम लाईन भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त कुरा ज्ञापन पत्रको रुपमा बुधवार पठाइएको छ । काठमाडौ, तराई मधेश सहित अन्य सवै जिल्लाहरुमा आन्दोलनकारीहरु प्रर्दशन गर्दै बुधवार दिउसो प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उक्त ज्ञापन पत्र पठाएको गठवन्धनका प्रवक्ता परशुराम तमाडले बताए ।
सिघानिया हत्याकाण्डमा संजय साहलाई थुनामै राख्न अदालतको आदेश ।
at 6:45 AM Posted by Dalan
जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्याकाण्डका तीन जना अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न धनुषा जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । भने अन्य तीन जना अभियुक्तलाई धरौटी राखी साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ ।
मंगलबार अदालतको ईजलास नं ५ का न्यायधीश डा राजेन्द्र कुमार आचार्यको एकल ईजलासले सिंघानिया हत्याको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोग लागेका धनुषा क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित एवं निलम्बित सांसद संजय कुमार साहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । निलम्बित सांसद साह जनकपुर बमकाण्डको अभियोगमा पूर्वपक्षको लागि हाल थुनामै रहेका छन् ।
त्यस्तै सिंघानिया हत्याको व्यवस्थापनको अभियोग लागेका शसस्त्र गतिविधी गर्दै आएका जनतान्त्रिक टाईगर जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष धर्ती सिंह भनिने चन्द्रदीप यादव र सोहि घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा एकलाल सहनीलाई समेत थुनामा राख्न आदालतले आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै अन्य घटनामा संलग्न अभियु्क्तहरु ओमप्रकाश यादवलाई २ लाख रुपैँया र रामकरण यादवलाई ५० हजार रुपैँया धरौटीमा तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको जनाएको छ । यस्तै सिंघानिया हत्या घट्नामा संलग्न भनिएका मुकेश चौधरीलाई यस घट्नामा २० रुपैँया धरौटीमा रिहा गर्न आदालत आदेश दिएको छ । चौधरी २०६९ बैशाख १८ गते जनकपुरको रामानन्दचोकमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको बमकाण्डको मुख्य अभियुक्तको रुपमा पक्राउ परी थुनामै रहेका छन् ।
आन्दोलनकारी गठवन्धनको सचिवालय द्धारा आन्तरिक तयारी सुरु ।
at 6:52 AM Posted by Dalan
आउदो १५ बैशाख देखि आन्दोलनमा पुन होमिन लागेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहित आदीवासी जनजातीको संयुक्त गठवन्धनले आज देखि औपचारिक रुपमा त्यसको तयारी सुरु गरेको छ । गठवन्धन सचिवालयको आज बसेको बैठकले १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने ज्ञापन पत्र सहित अन्य विरोध कार्यक्रमहरुको वारेमा समेत आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने वारेमा छलफल गरेको छ । हरेक जिल्लावाट प्रधानमन्त्रीलाइ एउटै व्योहोराको ज्ञापन पत्र आओस भन्ने उदेश्यका साथ केन्द्र वाटै ज्ञापन पत्र बनाएर हरेक जिल्लामा पठाउन लागिएको गठवन्धनका सचिवालय नेताहरुले बताएका छन । आउदो १५ गते आन्दोलनरत गठवन्धनले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउदै छन । त्यसैगरी २३ गते देखि गते सम्म हुने विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रिय तहका सभाहरुमा समेत कुन नेताहरु काहा सहभागी हुन्छ, त्यसको समेत टुगो सचिवालयले लगाएको छ ।
मधेश केन्द्रित अभियानमा बाबुराम भटराई ।
at 7:41 AM Posted by Dalan
नयां संविद्यानको घोषणा लगतै एमाओवादी पार्टी परित्याग गरेर नयां शक्तिको अभियानमा जुटेका पुर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भटराई मधेश केन्द्रित अभियानमा एक पछि अर्को कार्यक्रमहरु लागातार गर्दै आइरहेको देखिन्छ । नयां संविद्यानको घोषणा संगै तराई मधेशमा आन्दोलन उठे पश्चात प्रमुख दलहरुको प्रभाव मात्रै होईन कि साख नै समाप्त भएको अवस्था भटराईको कार्यक्रमहरु लागातार चाही भईरहेको छ । पछिल्लो समयमा यही बैशाख ३ गते वाट भटराई मधेश आन्दोलनको मुख्य आधार क्षेत्र मानिने सप्तरी देखि कपिलवस्तू सम्मको यात्रा गरेका छन । मधेश स्वभाभिमान जागरण यात्रा नाम दिइएको भटराईको यो अभियान अन्र्तगत भटराई उनका ५० जनाको टोलीले भित्रि मधेशको वाटो हुदै तराई मधेशको ग्रामिण भेगहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेका थिए । यस अघि भटराई तराई मधेशका पुर्व देखि पश्चिम सम्मका मुख्य सहरहरुमा स्थानिय विभिन्न सरोकारवाला अगुवाहरु संग अन्तक्रिया कार्यक्रमहरु गरेका थिए ।
तमलोपाको पहिलो महाधिवेशन आउदो असार ६ देखि ८ सम्म नवलपरासीमा हुने ।
at 7:09 AM Posted by Dalan
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको एक प्रमुख घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आउदो असार ६ देखि ८ गते सम्म नवलपरासीमा हुने भएको छ । विस ०६४ पुषमा स्थापन भएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, तमलोपाको स्थापनाको ६ बर्ष वितिसक्दा पनि हाल सम्म महाधिवेशन हुन सकेको थिएन । निर्वाचन आयोगले तमलोपालाई तीन पटक पार्टीको महाधिवेशन गर्न पत्र काटि सकेका छन । पछिल्लो पटक एक महिना अगाडी मात्रै आयोगले तमलोपालाई पुन पत्र काटदै महाधिवेशन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पहिलो मधेश आन्दोलन पश्चात तत्कालिन सरकारका वरिष्ठ मन्त्री समेत रहेका काग्रेसका कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी र सरकार दुवै परित्याग गर्दै तमलोपाको स्थापना गरेका थिए ।
१ जेठ देखि सिंहदरवार घेराउ गर्ने आन्दोलनरत मोर्चाको घोषणा ।
at 7:03 AM Posted by Dalan
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आउदो १ जेठ देखि नेपाल सरकारको केन्द्रिय प्रशासनिक निकायको केन्द्र मानिने सिंहदरवारलाई घेर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो केहि दिन यता पुन आन्दोलनको कार्यक्रमलाई लिएर लागातार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मोर्चाले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका हुन । १ जेठ देखि सिहंदरवार घेराउ गर्नु अघि मोर्चाले काठमाडौ सहित क्षेत्रिय र जिल्ला तहमा विभिन्न खालका प्रचारात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन । जस अन्र्तगत मोर्चाले विरोधसभा देखि सरकार कार्यलयहरु अगाडी प्रर्दशन सहित अन्य कार्यक्रहरु रहेका छन । २१ बैशाख देखि सुरु हने यस्ता विरोधात्मक कार्यक्रमको दौरान मोर्चाले १ जेठ देखि काठमाडौ जाउ सिहदरवार घेरौ भन्ने नाराको समेत व्यापक प्रचार गर्ने जनाएको छ । मोर्चाको यो आन्दोलनमा जनजाती, आदीवासी सहित कयौन पक्षहरुको सहभागीता समेत रहने आज जारी गरिएको विज्ञिप्तमा उल्लेख गरिएको छ । शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रमको विज्ञिप्तमा २७ ओटा विभिन्न दल र संगठनहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
मधेशी मोर्चाद्धारा अन्तराष्टिय जगतलाई आन्दोलनवारे बिफ्रिग । १ जेठ मा काठमाडौ भराउ गर्ने तयारी ।
at 7:07 AM Posted by Dalan
पछिल्लो समयमा पुन आन्दोलन उठाउने वारेमा विभिन्न खालको अभिमतहरु वाहिर आइरहदा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आज आफनो अवस्था वारेमा नेपाल स्थित अन्तराष्टिय निकायका प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराएका छन । पुन आन्दोलन घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मोर्चाले आफनो आन्दोलनको वारेमा मुख्य गरी विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराएका थिए । मोर्चा सहित आदीवासी जनजातीहरुको संयुक्त गठवन्धनले भोली दिउसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन मार्फत आन्दोलनको घोषणा गर्दै छन । मोर्चाले पछिल्लो समयमा काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने बताउदै आएका थिए । आज विदेशी प्रतिनिधिहरु संगहरु संगको भेटमा मोर्चाका नेताहरुले त्यसकै समबन्धमा अन्तराष्टिय निकायलाई जानकारी गराएको नेताहरुले बताएका छन । त्यस अवसरमा विदेशि प्रतिनिधिहरुले मोर्चाको पुन आन्दोलन कस्तो खालको र कति लामो हुने वारेमा विशेष जिज्ञासाहरु राखेका थिए ।
काठमाडौ भर्ने तयारी ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन प्रति मधेशी मोर्चाको आपत्ति ।
at 7:19 AM Posted by Dalan
नयां बर्षको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधन र त्यस क्रममा मधेशको वारेमा गरेको टिप्पणी प्रति आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले कडा आपति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतीको लागी आब्हान गरेको भए पनि तराई मधेशमा भएको आन्दोलनलाई अवमुल्यन हुने गरी वोलेको मोर्चाका नेताले बताएका छन । मोर्चा आबद्ध तमलोपा उपाध्यक्ष हृदेश त्रिपाठी भन्छन, प्रधानमन्त्रीले यो सम्बोधन गरेको किन हो त्यही हामीले बुझेका छैनौ । उनले मधेशमा भएको आन्दोलनलाई अझै पनि अधिकारको संघर्ष नभएको ठानेका रैछन, अनि मधेशमा भएको आन्दोलन चाही अरु सल्लाहमा हुन्छ, ओली सरकारको मन्त्री ४ बुदे दिल्लीमा गएर दिदा आफनो हुन्छ ? त्रिपाठी प्रश्न गर्दै भने, त्यसो भए भने एक वाक्य किन सहमतीका लागी आउनु पर्यो भन्ने खर्चेको होलान आलीले ।
सिंघानिया हत्या काण्डमा संजय साह विरुद्ध मुद्धा दायर ।
at 8:24 AM Posted by Dalan
पछिल्लो समयमा जनकपुरका संचारउद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्या काण्डमा समेत मुछिएका संजय साह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यलय धनुषाले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन । प्रहरीले साह सहित उक्त घटनामा अन्य १७ जना माथी समेत मुद्धा दायर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय धनुषाले जनाएको छ । ०६६ साल फागुन १७ गते होली पर्वको दिनमा संचारउद्यमी सिघानियाको हत्या जनकपुरको शिव चौकमा भएको थियो । प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धानले सिंघानियको हत्याको मुख्य योजनाकार संजय साह नै रहेको खुलेको छ । त्यही आधारमा प्रहरीले उनी विरुघ मुद्धा चलाएका हुन । साह यस अघि नै जनकपुरको रामानान्द चौकमा ०६९ बैशाखमा भएको बम काण्डमा मुछिएर पछिल्लो समयमा जेलमै थिए । गएको १७ चैतमा प्रहरीले सिघनिया काण्डमै संग्लन एक जना सशसत्र समुह समुह चलाउने चन्द्रदिप यादव पक्राउ परे पछि संजय साहको सग्लनता रहेको पुष्टि गरेको थियो । चन्द्रदिप यादवले आफुले संजय साहकै १० लाख रुपैयामा सुपारी लिएर उक्त घटना घटाएको वयान प्रहरी समकक्ष दिएको छ । त्यस संगै साह संगै जनकपुर कम काण्डमा मुछिएका मुकेश चौधरीले समेत आफले सिघानिया हत्या काण्डको जिम्मा तत्कालिन समयमा साहकै दबाबमा लिएको बताएका थिए ।
६ बैशाख देखि काठमाडौमा नियमित प्रर्दशन गर्ने मधेशी मोर्चा र आदिवासी -जनजातीको तयारी ।
at 7:04 AM Posted by Dalan
शनिवार बसेको मोर्चा र आदिवासी जनजातीहरुको संयुक्त बैठक
चैत मसान्त पश्चात काठमाडौ सहित तराई मधेशमा आन्दोलन गर्ने बताउदै आएका आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले ६ बैशाख पश्चात काठमाडौमा नियमित विरोध प्रर्दशनहरु गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिवार मात्रै आदिवासी जनजातीहरु संग संयुक्र रुपमा आन्दोलन गर्ने सहमती गरेको मोर्चाले ६ बैशाखमा काठमाडौमा वृहत रुपमा गर्ने अन्तक्रिया मार्फत त्यसको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारलाई चैत मसान्त सम्मको अल्टीमेटन दिएको मोर्चाले ६ बैशाखमा काठमाडौको राष्टिय सभागृहमा सवै पक्षको उपस्थितमा वृहत अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको छ । पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजातीहरु सग धनिभुत अनौपचारिक संवाद गरिरहेको मोर्चाले शनिवार औपचारिक बैठक गरेका थिए । फोरम नेपालका्े कार्यलयमा भएको उक्त बैठकमा अव संयुक्त आन्दोलन गर्ने वारे निर्णय गर्दै ६ बैशाखमा कसरी आन्दोलनको घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । मोर्चा सम्बद्ध नेताहरुका अनुसार शनिवारको बैठकमा आन्दोलनको अगामी कार्यतालिका तय गर्न २ बैशाखमा पुन सवै पक्षको संयुक्त बैठक गर्ने समझदारी भएको छ ।
मधेशी मोर्चा र जनजाती पार्टीहरु विच बृहत छलफल हुदै ।
at 7:36 AM Posted by Dalan
बिहिवार तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आदीवासी जनजाती समबद्ध पार्टीका अगुवाहरु संग छलफल गर्दै
बैशाख देखि काठमाडौमा समेत आन्दोलन गर्ने बताउदै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र विभिन्न जनजातीहरुको पार्टीहरु विच भोली संयुक्त बैठक हुदैछ । पछिल्लो समयमा मोर्चाका केहि शिर्ष नेताहरु जनजाती सहित अन्य जातीय संगठनहरु संगको छलफललाई महत्वका साथ बढाइरहेका थिए । खासगरी तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस्ता बैठकहरु बिशेष गरी सक्रिय देखिएका थिए । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर त हालै राजविराजमा पार्टीको बैठक गरेर काठमाडौ फर्किए लगतै यस्ता बैठहहरु लागातार गर्दै आएको देखिएको थियो । त्यसैगरी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव पहाडकै कतिपय जनजाती वाहुल्य क्षेत्रमा अगामी आन्दोलनका लागी प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत गरेका छन । आन्दलोनको लागी यस्ता गृहकार्य एक चरण पुरा भए पछि भोली देखि औपचारिक तहमा छलफलहरु हुन लागेको नेताहरुले बताएका छन । भोली विहान ११ बजे फोरम नेपालको कार्यलयमा हुने बैठकमा मोर्चा सहित १५ ओटा पार्टीहरु सहभागी रहने बताइएको छ । यस अघि मोर्चा र केहि जनजाती पार्टीहरु सहितको ९ दलीय संघिय गठवन्धन थियो ।
बैशाख पहिलो हप्ता काठमाडौमा बृहत अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गर्ने ।
at 7:08 AM Posted by Dalan
हालै तमलोपाले काठमाडौमा आयोजना गरेको अन्त्क्रिया कार्यक्रम / पछिल्लो समयमा मोर्चा सम्बद्ध घटकहरु विभिन्न पक्षहरु संग सल्लाह गर्नमा व्यस्त छ ।
चैत मसान्त सम्मको सरकारलाई दिएको अल्टीमेटन सकिए पछि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बैशाखको पहिलो हप्ता देखि आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । मोर्चा स्रोतका अनुसार बैशाखको पहिलो काठमाडौमा मोर्चाले बृहत अन्तक्रिया कार्यक्रम घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरिहेको छ । काठमाडौ स्थित राष्टिय सभागृहमा हुने मोर्चाको उक्त बृहत अन्तक्रिया कार्यक्रममा १२ सय भन्दा वढीलाई निमत्याउन लागीएको मोर्चाले जनाएको छ । अहिले मिती पुर्ण रुपमा निश्चित नभए पनि मोर्चा सम्बद्ध स्रोतका अनुसार ६ बैशाखमा उक्त कार्यक्रम गर्ने मोर्चाको आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । मोर्चाले बृहत अन्तक्रिया भनेको कार्यक्रममा खासगरी जनजाती र पहाडी समुदायका अगुवाहरु विशेष गरी निमन्त्रणा गर्न लागीएको छ । त्यसको साथै मधेशका विभिन्न पक्षका अगुवाहरुको समेत उपस्थितमा हुने उक्त बृहत अन्तक्रिया कार्यक्रमकै मन्च वाट मोर्चाका शिर्ष नेताहरु आन्दोलनको पुन घोषणा गर्ने तयारी गरेको मोर्चा सम्बद्ध स्रोतको दावी छ ।
‘सूटर’हरू झण्डावाल गाडीमा
at 7:01 AM Posted by Dalan
जनकपुरको शिवचोकमा अरुण सिंघानियालाई गोली हानेर ढालेपछि चार जना ‘सूटर’ राज्यमन्त्री संजय साहको झण्डावाल गाडी चढेर काठमाडौं आएका थिए ।
१७ चैत २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले एउटा सशस्त्र समूहका अध्यक्ष चन्द्रदीप यादवलाई सार्वजनिक ग¥यो । प्रहरीले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिको शीर्षकमै भन्यो ‘सिंघानिया हत्याका योजनाकार पक्राउ ।’ विज्ञप्तिको पहिलो वाक्यमा महत्वका साथ भनिएको थियो, ‘सिंघानिया हत्याका योजनाकार र मुख्य भूमिका खेल्ने चन्द्रदीप यादवलाई पक्राउ गर्न हामी सफल भएका छांै ।’
जनतान्त्रिक टाइगर जनशक्ति पार्टीको प्रमुखको आवरणमा आपराधिक गतिविधिमा थिए चन्द्रदीप यादव । उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले ६ वर्षअघि जनकपुरमा मारिएका संचार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्याको छानबीनलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याएको दाबी गरेको छ ।
१७ फागुन २०६६ होली पर्वको दिन थियो । जनकपुरको शिवचोकमा होली मनाइरहेका सिंघानियालाई गोली हानियो । लगत्तै तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेश सशस्त्र समूहका मुकेश चौधरीले स्थानीय संचारकर्मीलाई फोन गरेर घटना आफूले गराएको भनेर जिम्मेवारी लिए । अर्को सशस्त्र समूह जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समूहका राजन मुक्तिले पनि घटना आफूले गराएको भनेर दाबी गरे । चौधरी र मुक्ति दुवै अहिले जेलमा छन् । प्रहरीले उनीहरूलाई डेढ बर्षअघि भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएको थियो ।
चन्द्रदीप पक्राउ परेपछि अरुण सिंघानिया हत्याकाण्डको भित्री पाटो खोतल्न हामीले कारागारमा रहेका मुकेश चौधरीलाई भेट्यौं । उनले हाकाहाकी भने, ‘मलाई सिंघानियाको हत्या भए लगत्तै संजयले ९८५४०२०२०७ नम्बरबाट फोन गरेर हत्याको जिम्मा लिन भनेका थिए । त्यसपछि मैले घटनाको जिम्मा लिएँ ।’
दुई डनको चक्रव्यूह
मधेशी पार्टीहरु बैठक र प्रशिक्षणमा व्यस्त ।
at 6:48 AM Posted by Dalan
तमलोपाको भैरहवा बैठक ।
आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर सरकारले चैत मसान्त सम्मको अल्टमिेटन दिए पछि आन्दोलनरत मधेशी मोर्चामा आबद्ध सवै दलहरु आन्तरिक बैठक देखि अगामी आन्दोलन केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमममा व्यवस्त छ । मोर्चाको बैठकमा गएको १८ चैतमा यस्तो सहमती भएको थिया, मोर्चाका नेताहरु भन्छन, आन्दोलन जारी रहुन्जेल पहिला जस्तो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा होइन कि वरु स्थानिय स्तरमा अगामी आन्दोलनका लागी प्रशिक्षण दिने कुरा भएको थियो । पछिल्लो समयमा मोर्चा आबद्ध मधेशी पार्टीहरु त्यसैमै व्यवस्त देखिन्छ ।
मधेशमा व्यापक धरपकड पुन सुरु ।
at 7:05 AM Posted by Dalan
महोत्तरीमा पुन २२ जना विस्थापित । आन्दोलनमा हुदै नभएको व्यक्ति माथी मुद्धा र १० हजार धरौटि ।
महोतरीमा हालै स्थानिय प्रशासनले सयौको संख्यामा स्थानिय नेताहरु माथी मुद्धा लगाए पछि त्यसको विरुद्धमा प्रर्दशन गर्दै स्थानिय कार्यकर्ताहरु
मधेशी मोर्चाले बैशाख पहिलो हप्ता देखि पुन आन्दोलन गर्ने बताइरहदा तराई मधेशका जिल्लाहरुमा व्यापक धरपकड पछिल्लो समयमा हुन थालेको स्थानिय मधेशी नेताहरुले बताएका छन । आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी सहित तोडफोडको निहू बनाएर स्थानिय प्रशासनले जिल्लामा प्रभावहाली देखिने प्राय जसो सबै मधेशी नेताहरु विरुद्ध पुर्जी गर्न थाले पछि मधेशी पार्टीहरु भित्र यसले तरड पैदा गरिएको छ । मोर्चाले चैतको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको अल्टीमेटन सहितको ध्यानाकर्षणमा समेत आन्दोलनको क्रममा लगाइएको मुद्धाहरु फिर्ता गर्न माग गरिएको थियो । त्यही दिन बेलुकि मोर्चा संग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलमा धाइतेहरुको उपचार र आन्दोलनको क्रममा लगाइएको मुद्धा आउदो मन्त्री परिषदवाट फिर्ता गर्न आश्वासन दिएका थिए । त्यस लगतै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई आन्दोलनको क्रममा धाइते भएकाहरुलाई उपचार गर्न भनेर ३१ लाख रुपैया दिने निर्देशन दिएको थियो । यद्यपी मोर्चाले त्यो अझै पाइसकेको छैन । तर आश्वासन अनुरुप मुद्धाको वारेमा उक्त मन्त्रीपरिषदको बैठकले केहि गरेनन । वरु पछिल्लो केहि हप्ता यता मधेशका जिल्लाहरुमा धरपकड पुन बढन थालेको मधेशी नेताहरुले बताएका छन ।
११ बुदे माग सम्बोधन नहुन्जेल सम्म कुनै पनि निर्वाचन असम्भव - तमलोपा
at 6:54 AM Posted by Dalan
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका एक प्रमुख घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले मधेश आन्दोलनको ११ बुदे माग सम्बोधन नहुन्जेल सम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने सहितको अगामी राजनितीक कार्यदिशा लिने निर्णय पारित गरेको छ । शनिवार देखि सप्तरीको राजविराजमा सुरु भएको तमलोपाको केन्द्रिय कार्यसमितीले पारित गरेको ९ वुदे राजनितीक प्रस्तावमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । शनिवार देखि राजविराजमा सुरु भएको दुइ दिने बैठकको आज पहिलो दिनमै महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रस्तुत गरेको उक्त ९ बुदे राजनितीक प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको थियो । संविद्यान प्रति असन्तुष्टि राख्दै सुरु भएको मधेश आन्दोलनको सम्बोधन नगरी स्थानिय वा आवद्यिक कुनै पनि निर्वाचन सम्भव हुन नदिने त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । पारित राजनितीक प्रस्तावले हालै ब्रसेल्समा भारत र इयुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाइ समेत स्वागत गर्दै त्यसलाई महत्वपुर्ण उपलब्धी ठानेको छ ।
पारिको आकर्षण बढ्दो
at 1:31 AM Posted by Dalan
सिमावर्ती भारतीय बजारहरु मुज्जफरपुर, भिठ्ठामोड र लखउनमा नेपालीको बढ्दो उपस्थिति र लोभलाग्दो प्रगतीले पारिको आकर्षण बढ्दो छ भन्ने देखाउँछ ।
चितलाङ्गका अमरकुमार श्रेष्ठ मज्जफरपुरमा अमर कुमारका नामले चिनिन्छन् । काठमाडौ थानकोट भन्दा तलको पहाडी बस्तिका अमर भारतको विहार राज्यमा पर्ने व्यापारिक शहर मज्जफरपुरमा जमेर बसेका छन् । त्यँहा बसोबास गरेको ३० बर्ष हुन लाग्यो । उनी त्यहाँका नागरिक हुन । २५ बर्ष अघि उत्तैबाट चितवनकी गितासंग विवाह गरे । विवाह पछि गिता प्रधानको नाम गितादेवी भयो । एउटा स्थानीय औषधी कारखानामा काम गर्ने अमरले घरमा छुटै सानो उद्योग पनि संचालन गरेका छन । मुज्जफरपुरको जेल चौकमा सानदार तीन तल्ले घर छ । अमर र गिताका दुई छोरा र १ छोरी छन् । दुई छोराले भर्खरै स्नातक सके । अमर भन्छन, ‘सरकारी जागीरको तयारी गर्दैछन् उनीहरु ।’
मज्जफरपुरको मुसहरी टोलका छोटु कुमार त्यँहाका नामुद जग्गा दलाल हुन । छोटूका दाई गणेशबहादुर चाहिँ मज्जफरपुरमै भारत सरकारको कृषी विभागमा काम गर्छन । छोटु नेपालको पुर्वी पहाड ताप्लेजुडका हुन । उनको विवाह बुटवलकी केटीसंग भयो । छोटु भन्छन, ‘काम गर्न आएपछि यतै सेटल भएँ । नेपाल फर्कन मन लागेन । घर बनाइयो, काम धन्दा यतै सुरु गरियो ।’
उनका दुई छोरालाई पनि पुख्यौली थलो नेपालसंग खासै सरोकार छैन । छोटु भन्छन ‘अब त ससुराली खलकका मानिस पो यता आउने योजना बनाउदै छन ।’ अहिले उनको परिवारमा कसैसंग पनि नेपाली नागरिकता छैन ।’ छोटु भन्छन, ‘अब यतै बस्ने भयौ, नेपाली नागरिकता बनाउदैनौ होला ।’